Koety: Rehefa Notanana Am-ponja Telo Volana, Nafahan’ny Fitsarana Ilay Mpampiasa Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2011 9:06 GMT
Telo volana lasa izay, nahatratra ny fetra faran-tampony ny tsy fahaiza-mandefitra ara-pinoana tamin'ny raharaham-panjakana, taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ny Bahraini, dia nisy Koetiana iray mpampiasa Twitter nantsoina hoe Nasser Abul (@NasserAbuL) nosamborina rehefa avy niteny ratsy ny fitondrana Bahraini sy Saodiana.
Izany fanapahan-kevitra izany dia noraisina herinandro vitsivitsy taorian'ny nanasaziana telo taona an-trano maizina ny Sunnite iray mpandefa bitsika antsoina hoe Mubarak Al-Bathali (@mubaark) noho ny fitenenan-dratsy antokom-pivavahana iray sy noho ny fikatsahana “hanohintohina ny firaisam-pirenena”. Raha i Al-Bathali kosa, izay tsy toa an'i Abul, dia tsy nandà velively izay nosoratany tao amin'ny Twitter. Taty aoriana anefa ilay sazy dia nahena ho enim-bolana an-tranomaizina.
Tao amin'ny aterineto, dia nataon'ireo Koetiana mpampiasa aterineto fitaovana ireo lahatsoratra ara-pinoana mba hifampiitenenan-dratsy. Rehefa mijery ireo fanehoan-kevitra momba ny famotsorana an'i Abul, dia mety ho sarotsarotra ihany ny hahita olona mikirakira ity raharaha ity ho toy resaka zon'olombelona na ara-politika. Tao amin'ny Kuwaiti National Online Forum na Sehatra Nasionaly Koetiana Fiadian-kevitra ao amin'ny Aterineto, dia niantomboka ny resaka taorian'ny famotsorana an'i Abul rehefa nanoratra ireto teny manaraka ireto ny mpikambana iray antsoina hoe Al-Ashtar [ar] ao amin'ilay sehatra fiadiankevitra::
Al-Ashtar: Nivoaka ny marina na dia efa tara aza; ao anaty tany tan-dalàna isika ka araka ireo lalàna ireo dia azo entina eny amin'ny fitsaràna avokoa ny olona. Tsy misy toerana ho an'ny fifehezan'ny lalàn'i Baroa. Tsy mpisolo vaika ny ankàlana akory i Nasser. Noho izany dia manantena izahay fa azon'ny olona ny lesona.
Nisy mpikambana iray hafa antsoina hoe “Bidoon Mojamala” [ar] tao amin'ilay sehatra fiadian-kevitra no namaly hoe:
Bidoon Mojamala: Ekeko hoe tara loatra ny fipoiran'ny marina, kanefa ny marina dia izao, kely noho izay tokony ho sahaza azy no azon'i Nasser raha ny momba ny sazy no asian-teny. Tokony ho tsapanao fa i Nasser amin'izao fotoana dia tsy toy ilay Nasser taloha intsony satria nomen'ny Polisim-pirenena lesona izy mba hisorohana ny korontana toy izany! Ka ny andro ho avy no hanaporofo fa hitandrina kokoa ianao sy izy mialohan'ny hitenenana zavatra.
Al-Ashtar: Ny sazy telo volana dia natao ho an'ny fitenenan-dratsy antokom-pivavahana; fantaro anefa, fa raha ampiharina io lalàna io dia tsy maintsy hanorina fonja any an-tany efitra ihany isika handefasana ny antsasaky ny mponina any. Raha ny hevitro manokana aloha, dia manantena aho fa hampiharina amin'ny fomba hentitra amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka io lalàna io fa tsy amin'olon-tokana ihany.
Sager: Ireo izay miresaka demôkrasia avy amin'ireo sekta roa ireo dia tokony hiaro na hanoso-potaka ny lafy roa andaniny sy ankilany.